BREAKING: पारसले पहिलोपटक ह!त्याका,ण्डको रहस्य खुलाए (भिडियो) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/BREAKING: पारसले पहिलोपटक ह!त्याका,ण्डको रहस्य खुलाए (भिडियो)
BREAKING: पारसले पहिलोपटक ह!त्याका,ण्डको रहस्य खुलाए (भिडियो)
425 8 minutes read
पुर्व युवराज पारश शाहले पहिलोपटक दरबार ह त्या काण् डको र हस्य खुलाएका छन् । उनले ह त्या का ण्ड पश्चात् समितिलाई बताएको कुरा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको हो । एक युट्युब च्यानलमा उनले बोलेका कुराहरु सार्वजनिक भएको छ । उक्त घ ट्नामा पारश अन्य सदस्यहरुसँगै थिए । तर, उनी जोगिए । के कारणले आफू उक्त घ ट्नाबाट बच्न सफल भएको सबै कुरा बताएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
पारस शाह अझै उस्तैः थाइल्यान्डमा खानुसम्म ठ क्क र खाएर नेपाल फर्किएपछिको सार्वजनिक व्यवहारले उ दण् ड छवि सुध्रँदै थियो, पूर्व युवराज पारसको । ला गूऔ षध के समा चार पटक प क्रा उ परेसँगै ग म्भी र बिरामी भएका उनी ध न्न बाँचेका थिए । एक महिना लामो उपचारपछि बौ रिए र नेपाल फर्किएपछि उनको दैनिकी निक्कै बद्लिएको देखिन्थ्यो ।
ला गूऔ षधको ल त र ग म्भी र बिरामीको प्रभावले पहिलाझैँ चमक थिएन उनको मुहारमा । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि मायालाग्दो हुलियामा देखिन्थे उनी । नेपाल बसाइका क्रममा उनको उ दण् ड व्यवहार ठप्पै रोकिएको थियो । उनी कहिले परिवारसँग रेस्टुराँमा देखिन थालेका थिए भने कहिले मन्दिर र आश्रममा । थाइल्यान्ड बसाइका क्रममा चलेको अ फेय र्सको प्रभावले श्र्रीमती हिमानी शाहसँग उनको सम्बन्ध सुध्रन सकेन । छोराछोरीसँग घुम्न निस्किएको तस्बिरले उनमा अभिभावकको दायित्वबो ध भएको देखिन्थ्यो । तर उनको यो छवि लामो समय टिक्न सकेन । जेठ २८ को घ टनाले शाहज्यादाबाट युवराज हुँदै पूर्वयुवराज भएका पारस वीर विक्रम शाहमा चौवन्न ठ क्क र त्रिपन्न घु स्सा पछि पनि कुनै परिवर्तन हुन नसकेको र उस्तै उ दण् ड रहेको देखायो ।
सार्वजनिक भएको घ टना सामान्य नै हो तर लुकाएको पाटो भने निक्कै ग म्भी र छ । जेठ २८ दिउँसो बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडीले ट्राफिक नियम उ ल्लं घन गर्दै जाउलाखेलबाट हु इँकि एपछि सम्भावित दु र्घट ना रोक्न ट्राफिक प्रहरीले उनले चलाएको गाडी नि यन्त्र णमा लिएर पाँच सय ज रिवा ना तिराएको थियो । अनियन्त्रित रुपमा चलाएको गाडी ट्राफिकले जाउलाखेलमै नि यन्त्र णमा लिन खोज्दा उनले अ टेर गरे । गाडी हु त्तिदै थापाथली आइपुग्दा ट्राफिकले नि यन्त्र णमा लिएर ब्लुबुक र लाइसेन्स नि यन्त्र णमा लियो र पाँच सयको चिट का ट्यो । सार्वजनिक भएको घट ना विवरण यत्ति हो ।
पारसको गाडी नि यन्त्र णमा लिएर चिट का ट्ने ट्राफिक प्रहरीको खोजीका क्रममा खुल्यो, त्यस दिनको अर्को ग म्भी र पाटो । जसले बाहिर आएझैँ सो दिन पारसले ट्राफिक नियम उ ल्लं घन मात्र नगरेको बरु ह त्या प्रयासै गरेको पोल खुल्यो । पारसको स न्का हापनले १८ वर्ष अगाडिको प्रवीण गुरुङ का ण्ड दोहोरिँदै थियो थापाथलीमा । सा वधा नी नअपनाएको भए पारसको झोँ कको दोस्रो सिकार हुन्थिन्, थापाथलीमा कार्यरत ट्राफिक प्र हरी जवान सुष्मा चौधरी ।
चौधरीले भनिन्, ‘पहिल्यै सा वधा न भएर नबसेको भए कि च्ने नै रहेछन् !’ निर्देशनअनुसार गाडी रोकेर चौधरीले कागजपत्र माग्दासम्मको अवस्था सामान्य नै थियो । जब उनले कागजपत्र लिएर अलि पर पुगिन्, पारसले उनीतिरै ताकेर स्पिडमा गाडी चलाए । आइल्यान्ड पार गरिसकेकाले उनलाई गाडीले भेटेन र मात्र उनी जोगिइन् । ‘चालकको नामको ठाउँमा पारस वीर विक्रम शाहदेव लेखेको पढ्नासाथ एकछिन त के गर्ने के गर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘चालक गाडीभित्र रि सले आ गो भइसकेका थिए । गाडीभित्रै स्टेयरिङ नजिकै हातले जो डजो डले हा नि रहेका थिए ।’
चौधरीले त्यो दिनको दृश्य सुनाइन्, ‘एकछिन टाइम लाग्छ है, म माथि सोध्छु भनेर अलि पर गएँ । कुपन्डोल जाने साइडतिरको गाडी छोडेपछि पारसको गाडी स्पिडमा हामी भएतिर आयो । गाडी आएको स्पिड देख्दा त ‘लौ हा न्यो !’ भन्ने लागेको थियो तर आइल्यान्डमाथि बसेकाले ध न्न लागेन । मेरो डकुमेन्ट घरमा पुर्याउन आइज’ भन्दै उनले गाडी माइतीघरतर्फ हु इँक्या ए ।’ दुई वर्षदेखि थापाथलीमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिँदाको अनुभवले कहाँ बस्दा सुरक्षित होइन्छ भन्ने जानकार थिइन् चौधरी र जोगिइन् तर १८ वर्षअगाडि उनै पारसको स न्का हाप नले एक गायक तथा संगीतकारको ज्यान गएको थियो, ठाउँका ठाउँ सडकमा । घटना २०५७ साउन २२ को हो । पारसले चलाएको गाडीले ठ क्क र दिँदा मोटरसाइकल चलाइरहेका गायक तथा संगीतकार प्रवीण गुरुङ मा रि एका थिए । शक्तिमा रहेको दरबारले त्यसबेला न क्क ली चालक खडा गरेर उनलाई जोगाएको थियो ।
घ टना को दिन दरबारको दक्षिणी ढोकामा ल्यान्डक्रुजर गाडीले गुरुङ चढेको मोटरसाइकललाई ठ क्क र दिएर केसरमहल, लाजिम्पाट, पानीपोखरी हुँदै निर्मल निवास छिरेको थियो । गाडी नम्बरका आधारमा प्र हरी ले खोज्दा गाडी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको रहेको खुल्यो । दरबारको सोधखोजमा गाडी पारसले चलाएको देखियो । तात्कालीन नेकपा एमालेको युवा संगठनले पारसको शाहज्यादा पदवी खोस्न र का रबा ही गर्न पाँच लाखको हस्ताक्षर बुझाए पनि चालकको रुपमा खड्गबहादुर भुजेलको नाम सार्वजनिक भयो । ब दमा सी पारसले गरेको पक्कापक्की भए पनि केस त्यत्तिकै से ला यो । यो घ टना का बेला नारायणहिटी दरबारमा कार्यरत शाही पाश्र्ववर्ती विवेककुमार शाहले पुस्तकमार्फत् सो घ टना गराउने पारसै भएको पुष्टि गरिदिए ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमार्फत् ।
पुस्तकमा उनले लेखेका छन् ः प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘दरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि आइतबार राति भएको दु र्घट नामा मोटरसाइकल चालक गायक प्रवीण गुरुङको घटनास्थलमै मृ त्यु भयो । दु र्घट नापश्चात् मोटर नरोकिई ते ज गतिमा भागेर निर्मल निवासमा छि¥यो । उहाँले ल्यान्डक्रुजर मोटरको नम्बरसमेत दिनुभयो । तत्कालै महाराजाधिराजमा यो कुरा जाहेर गरेँ । सरकारबाट ‘माइला भाइ (अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र) लाई फोन गरेर तुरुन्त बुझ’ हुकुम भयो । ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फोन गरेँ । सरकारलाई पनि यसबारे केही जानकारी रहेनछ । ‘म बुझेर खबर गर्छु’ हुकुम भयो । आधा घन्टापछि ज्ञानेन्द्र सरकारले फोन गरेर हुकुम भयो, ‘विवेक, यस इट् इज हिम, त्यो मोटर पनि हो र पारसले चलाएको रहेछ, अब यो स मस्या कसरी स मा धान गर्ने, उपाय निकाल ।’
१८ वर्षको अवधिमा शक्ति सन्तुलन परिर्वतन भइसक्यो । राजतन्त्रको अ न्त्य भयो । दरबार ह त्या काण् डसँगै शाहज्यादाबाट युवराज भएका पारस पूर्वयुवराज भइसके । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणत भइसक्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाह, ग द्दीच्यु त हुँदै निर्मल निवास पुगे । तर पारस उस्तै देखिए, उ दण् ड र स न्का हा अनि व्यवहार गर्न नजान्ने घ मण् डी व्यक्ति ।घ टनाको एक सातापछि ट्राफिक प्रहरी चौधरीलाई भेट्दा पनि घ टनाको दिन पारसले आफूतिर स्पिडमा ल्याएको गाडी सम्झँदा ड राइ रहेकी थिइन्, सुष्मा । उनी कुरा गर्न राजी भए पनि आफूमाथिका अधिकारीसँग अनुमति लिन आग्रह गरिरहेकी थिइन् । अनुमति लिएरै कुराकानी सकियो । तस्बिर खिच्दा उनी अलि डराइन् । तस्बिरबारे पुनः हाकिमसँग अनुमति लिन आग्रह गरिन् । ‘कुराकानी गरिहाल्नु भएछ ठीकै छ तर तस्विर नछाप्नुहोला,’ माथिल्लो तहका अधिकारीले भने, ‘सडकमा उभिएर काम गर्ने कर्मचारी हुन्, भोलि केही होला कि !’ तस्बिर छापिएकै कारणले भोलि सडकमा केही होला भन्ने आशंका माथिल्लो तहका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
उ दण् डताको श्रृंखलाः पारसको वि वा दको श्रृंखला लामै छ । शाहज्यादा हुँदादेखि सुरु भएको उनको वि वा दको यात्रा पूर्व युवराज हुँदासम्म रोकिएको छैन । ला गूऔ षधको कु ल तबाट निकाल्न सुधार केन्द्रमा बसे पनि उनमा सुधार देखिएको छैन । ग म्भी र बिरामी भएसँगै एक महिना लामो अस्पताल बसाइपछि उनले दोस्रो जन्म पाए तर उनको ‘ब्या ड ब्वाई’को व्यवहारमा सुधार आएको बिल्कुलै देखिएको छैन ।
श्रीमती हिमानीसँगको सम्बन्धका कारण बेलाबखत उनी वि वा दमा आउने गरेका थिए । सार्वजनिक रुपमै वि वा दमा ताखनिएको २०५७ साउन २२ को घ टना पछि नै हो । गाडीले ठ क्क र दिएर गायक प्रवीण गुरुङको मृ त्यु भएपछि उनको ख राब छवि सार्वजनिक भयो । उनलाई का रबा ही गराउन पाँच लाख सर्वसाधारणको हस्ताक्षर संकलन भए पनि जोगिएका थिए उनी ।
तात्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशै ना स हुनेगरी भएको दरबार ह त्या का ण्डमा बाबु ज्ञानेन्द्र शाहसँगै उनी पनि आ शं कामा ता निएका थिए । घ टनाको ग म्भी र अनुसन्धान नहुँदा न उनको संलग्नता खुल्यो न आशं का नै हट्यो । गणतन्त्र घोषणापछि पनि उनको उ दण् डताको क्रम जारी नै रह्यो । २०६७ फागुन २८ मा चितवनको टाइगर टप्स रिसोर्टमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका बंगलादेशी ज्वाइँ रुबेल चौधरीसँग उनको जम्का भेट हुँदा गो ली नै चला ए । घ टनापछि पोखराको फूलबारी रिसोर्टमा आएर बसेका पारसलाई प्रहरीले होटलबाटै नि यन्त्रणमा लिएर हेलिकप्टरमा चितवन लगेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक अ परा ध अभि योग लागे पनि ‘आ इन्दा यस्तो नगर्ने’ सर्तमा रि हा भएका थिए ।
२०६८ जेठमा उनले बहिनीसँगको सम्बन्धलाई लिएर ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई कु टपि ट गरेको घट ना सार्वजनिक भएको थियो । २०६६ भदौमा उनी जा ली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा जोडिए । भारत मध्य प्रदेशबाट नक्क ली भारतीय रुपैयाँसहित नेपाली नागरिक अतिक मोहम्मद र भारतीय राजेश गुप्ता प क्रा उ परेपछि भारतीय मिडियाले जा ली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा पारसको नामसमेत जोडेका थिए । बैंककमै रहँदा उनले आफू अ सुर क्षित रहेको भन्दै त्यहाँको नेपाली दूतावासमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
यता बस्ने वातावरण नभएपछि ०६७ भदौ ११ मा सिंगापुर हुँदै थाइल्यान्ड पुगे पनि उनको उ दण् डता र वि वा द रोकिएन । चार पटक ला गूऔ षधसहित पक्राउ परे उनी । हृद याघा त भएर को मामा पुगेपछि अस्पतालमा एक महिनाको उपचारपछि बौ रिए र नेपाल फर्किए । थाइल्यान्डमा थाई युवती कन्निका चाइसानसँगको सम्बन्धले समेत उनी वि वा दमा छाएका थिए । पारस–कन्निका सम्बन्धको खुलासापछि नेपालमा रहेको परिवारसँगको उनको सम्बन्ध चि सि एको थियो । उनी नेपाल फर्किएपछि पनि कन्निकाले प छ्या उन भने छा डेकी छैनन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा दुवैको अन्त रंग तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । पारिवारिक जमघ टमा पहिला त्यत्ति धेरै नदेखिने पारस पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र, कोमलसँगको पारिवारिक जमघ टमा सँगै देखिने गरेका छन् । क्लबहरुमा छोराछोरीसहित पुग्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि पारस र हिमानी सँगै देखिएका थिएनन् । एक साताअघि लाजिम्पाटस्थित त्रिसारा रेस्टुराँमा भएको पारिवारिक भेटघाटमा लामो समयपछि हिमानीसँगै देखिएका थिए ।
पारसलाइ चिट का ट्ने ट्राफिक प्र हरीको बयानः पारसको गाडीले झण्डै कि चेन (सुष्मा चौधरी, प्र हरी जवान) त्यस दिन म बिहान १० बजेदेखि ड्युटीमा ख टिएकी थिएँ । सवा १ बजेदेखि वा कीट कीमा सन्देश आइरहेको थियो, ‘जावलाखेल साइडबाट एउटा गाडी अ निय न्त्रित गतिमा आइरहेको छ । दु र्घट ना निम्त्याउन सक्छ, रोक्नुस् । गाडी नम्बर बा ३१ प २१३१ । चालक विदेशीजस्ता छन् ।’
म थापाथली चोकैनेर ख टिए की थिएँ । हरिहर भवन र कुपन्डोलको ट्राफिकले पनि रोक्न नसकेको खबर आयो । रोक्नुपर्ने गाडी थापाथली आउँदै थियो । वा कीट कीमा टिपाइएको नम्बरको गाडी आइपुग्यो । परैबाट हात दिएर रोकेँ । गाडी रोकियो । गाडीनजिकै पुगेपछि भित्रैबाट ह प्का ए, ‘के भो ? किन रोकेको ?’ ‘हजुरको गाडीको नम्बर देखिएन, नम्बर प्लेटमा हि लैहि लो भाको रहेछ, त्यसैले बिलबुक दिनुस् न,’ मैले भनेँ । गाडीभित्र बसेका व्यक्ति उ त्तेजि त हुँदै गाडीको अगाडिको भागमा हत्केलाले हा निर हेका थिए । ‘तैँले मलाई चिनिनस्, तैँले मलाई चिन्न आवश्यक छ,’ भन्दै बिलबुक दिनुभयो ।
थापाथली चोक हुँदै धेरै पा वरफु ल व्यक्तिहरु हिँड्नुहुन्छ । एकपटक एकजना सभासदले त्यसरी नै थ र्का एका थिए । गाडीभित्र रहेका व्यक्तिले थ र्का उँदा ठूलै मान्छे पो हुन् कि भन्ने लाग्यो । बिलबुक हेरेँ । नाम याद गरिनँ । अनि, ‘लाइसेन्स हेरौँ न’ भनेँ । रि साई–रि साई भए पनि दिनुभयो ।
लाइसेन्समा नाम पढेपछि एकछिन झ संगै भएँ । चालकको नाममा पारस वीर विक्रम शाहदेव लेखिएको थियो । पूर्व युवराज पो हुनुहुँदोरहेछ ! नाम पढ्नासाथ एक छिन त के गर्ने, के भयो ! यसो हेरेको गाडीभित्र उहाँ रि सले आ गो भइरहेको देखेँ । गाडीमा हातले जो डजो डले हा निरहेको देखेँ ।
‘तपाईंलाई एकछिन टाइम लाग्छ है, ममाथि सोध्छु,’ भनेँ अनि गाडीभन्दा अलि पर गएँ । वा कीट कीबाट क न्ट्रो लमा खबर गरँे, ‘चालकको नाम पारस वीर विक्रम शाहदेव छ ।’ ‘जो भए पनि का रबा ही गर्ने हो, एकछिन वेट गर्नुस्, खबर आउँछ,’ भन्ने आदेश आयो । म यतातिर उभिएको बेला उता पारस गाडीबाट ओर्लिएर हि लो लागेको नम्बर प्लेट आफँ पुछ्नुभएछ । त्यतिबेलै वरिपरि रहेका सर्वसाधारण र चालकहरु ‘पारस, पारस’ भन्दै क रा ए । ह ल्ली ख ल्ली बढ्यो । उहाँ स रासर गाडीभित्र गएर बस्नुभयो ।
कुपन्डोल जाने साइडतिरको गाडी छोडेपछि स्पिडमा गाडी हु इक्या उँदै आयो । मसहित अन्य साथीहरु नजिकै थियौँ । गाडी आएको स्पि ड देख्दा त लौ हा न्योझँै लागेको थियो । सा त्तो गयो । क न्ट्रो लबाट सवारी नियम उ ल्लं घन गरेअनुसार का रबा ही गर्नु भन्ने आदेश आयो । क सुर ज थाभा वी गाडी चलाएको थियो । त्यहीअनुसार चि ट का ट्न लागेको थिएँ । ‘मेरो डकुमेन्ट घरमा पुयाउन आइज,’ भन्नुभयो । मैले ‘हस् हजुर’ भन्दिएँ । गाडी माइतीघरतर्फ हु इँकि यो । ‘क न्ट्रोलबाट का रबा ही गरेर छा ड्नुस् भन्ने आदेश आएपछि का रबा हीतिर लागेँ । ज थाभा वी गाडी चलाएको क सुरमा चालकको नाममा पाँच सय ज रिवा नाको चिट का टेँ । चि ट र लाइसेन्स महानगरीय ट्रा फिक प्र हरी महाशाखा पठाएँ ।
प्रेमीकाका लागि आमाबुवा र धर्म समेत छोडेका थिए कञ्चनले, अनिशालाई गा’ली नगर्नुहोला भन्दै छोराले लेखेको पत्र देखाउँदै भक्कानिइन् कञ्चनको आमा (भिडियो हेर्नुस्)
‘दि भ्वाइस अफ नेपालको चार जना कोचको बारेमा जान्नुहोस्, यस्तो छ उनीहरुको जिवन कथा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ छोडेर बझाङ गएकी सोनिका कागती बेच्दै, फेरीएको रुप समेत चिन्नै नसकिने (भिडियो हेर्नुस्)